2.5D flat ecacileyo
2.5D ukuprintwa kwesilika
3D eshushu ukugoba edge glue
iglasi epholileyo yabucala
iglasi epholileyo yokukhanya okuchasene neblue
Ikhuselwe i-9H PET Pad Screen Protector
Usenexhala lokuqhekeza iiflakes zeglasi?Usenexhala lomnwe wonzakele kumphetho weglasi?U-Keja ukhuphe umkhuseli wesikrini esitsha nge-PET eqinile.Ngokwenene iyasebenza ngokugqibeleleyo kwi-shaterproof, anti explosion kunye ne-edge crush resistance.Inokugoba kwi-180degree ngaphandle kwayo nayiphi na into eyaphukileyo.Ngexesha...
itreyi yokufakwa engaboniyo ifumana ipatent yamkelwe zombini i-EU kunye ne-USA
I-KEJA yenza uhlobo lwetreyi yofakelo lwesikhuselo seglasi.Inokusombulula ingxaki yokusebenzisa umthengi ukuba isikhuseli seglasi yeglasi ayinakubekwa kwiselfowuni okanye isibonisi sesikrini sephedi kwindawo echanekileyo, enokuthi ibangele iqamza emva kofakelo.
U-Keja wenze isicelo somkhuseli wesikrini se-TG
U-Keja wenze isicelo somkhuseli wesikrini se-TG.Inokusombulula ngokupheleleyo ubunzima babasebenzisi, ngakumbi xa isebenza kwi-pad/tablet.Esi sicelo somkhuseli wesikrini samkela uyilo olukhethekileyo.Isikrini sakhiwe ngaphakathi komfaki-sicelo, xa umfaki-sicelo ebekwe kwisibonisi sesikrini.Umoya uya...
I-Iphone13, uthotho olupheleleyo lomkhuseli wesikrini sesayizi yasungulwa.
Ngenxa yamandla kaKeja ekufumaneni idatha kunye nophuhliso lwemveliso, ukuthunyelwa kokuqala kukaKejas kwesikhuselo sesikrini se-iPhone13 kubo bonke abathengi bafumana i-100% ehambelana ne-iPhone13 yokwenyani.Sivuyisana nawe!Sinentembelo kwidatha yethu ye-iPhone13, ke senza amalungiselelo apheleleyo eodolo yobuninzi obuvela kwi-custom yethu...
I-Xiaomi entsha ye-11T / 11T Pro iza kukhutshwa ngoSeptemba, ehambelana ne-China yasekhaya i-Redmi K40S.
ngu admin on 21-08-30
Ngoku ka Weibo blogger @WHYLAB, Xiaomi ezayo Xiaomi 11T Pro 5G iselfowuni ifumene isiqinisekiso se-NTBC saseThailand.Le mveliso, ebizwa ngokuba yi-2107113SG, kulindeleke ukuba ikhutshwe phesheya ngoSeptemba, kwaye ixabiso lilindeleke ukuba libe yi-US $ 600 (malunga ne-3900 yuan).Ukuvuza kwangoku...
Singakwazi njani ukwahlula okulungileyo kunye nokungalunganga komkhuseli wesikrini seglasi epholileyo?
Okwangoku, kukho iintlobo ezininzi zeemveliso zokhuselo lweglasi kwimarike, kwaye abasebenzisi beefowuni eziphathwayo babonakala ngokulula xa bethenga.Singakwazi njani ukwahlula okulungileyo kunye nokungalunganga komkhuseli wesikrini seglasi epholileyo?1. Ukuthontsiza amanzi.Umphezulu womgangatho ophezulu ...
I-CTIS sesona sixhobo sikhulu sinemixholo ephathwayo ephathwayo kunye neemveliso zayo zeperipherals ngo-2021. I-KEJA irentisa ?indlwana yeemitha ezingama-36.Indawo yaseBothini.:?3JN32,Iholo N3.Masidibaneni apha.
Isiganeko, CTIS, 3JN32.
I-CTIS sesona sixhobo sikhulu sinemixholo ephathwayo ephathwayo kunye neemveliso zayo zeperipherals ngo-2021. I-KEJA irentisa ?indlwana yeemitha ezingama-36.I-Booth No.: 3JN32, iHolo i-N3.Masidibaneni apha.
Ukuvezwa kweemodeli zoomatshini bokwenyani be-iPhone 13: utshintsho olukhulu kwinkangeleko ye-iPhone 13
Kutshanje, imithombo yeendaba yangaphandle iveze iifoti zokwenyani zeemodeli zoomatshini bokwenyani be-iPhone 13, kwaye utshintsho oluninzi lunokubonwa kwimifanekiso.Okokuqala, ii-bangs ze-iPhone 13 zinokuba ncinci kakhulu.Ngenxa yokusetyenziswa kwenzwa entsha ye-ID yobuso, ubungakanani bemodyuli ...
Iifowuni ezisongayo zesikrini kufuneka zibe likamva?
ngu admin ngo 21-05-07
Ngokusisiseko, sinokubona itekhnoloji entsha evela kwiifowuni eziphathwayo rhoqo ngonyaka.Nangona kunjalo, ukujonga iingxelo zovavanyo lwamaziko ophando anje nge-IDC, ukuthunyelwa kwee-smartphone zehlabathi kukwindlela ehlayo, kwaye ixesha lokwahlulwa kwabantu liye lanyamalala kwixesha le-Intanethi ephathwayo.Nangona ndi...